Child Care Stabilization Grant Support & Technical Assistance - Somali - The Imagine Institute
Dooro Luuqad: EN | ES | SO
GARGAAR FARSAMO DEEQDA XASILINTA XANNAANADA ILMAHA
Natiijda kasoo baxday Xeerka Qorshaha Samatabbixinta Federaalka ee Maraykanka waxay tahay, deeqaha Xasilinta Xannaanada Carruurta (CCSG) waa in loo isticmaalo xasilinta, taageeridda, iyo kobcinta xoogga shaqada waxbarashada hore ee kala duwan si dib loogu dhiso nidaam daryeel ilmo oo xooggan oo ballaarinaya helitaanka daryeel tayo sare leh oo la awoodi karo.
Machadka Imagine wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo oo uu ku bixiyo taageero iyo kaalmo farsamo habka codsiga Deeqaha Xasilinta Xannaanada Carruurta (CCSG).
Bixiyeyaasha liisanka haysta
HALKAN KA CODSADA
Bixiyeyaasha FFN ayaa
JADWALKA GARGAARKA FARSAMADA HALKAN
Daawo sida-fiidyowyadayada Ingiriisiga, Isbaanishka, ama Soomaaliga.
Muqaal Af-Soomaali ah
SHURUUDAHA DEEQDA IYO XAQA LOOGU TALAGALAY
BIXIYAYAASHA DARYEELKA CARRUURTA EE liisan leh:
Tan waxa ku jira guri qoys oo liisan leh, xarumaha daryeelka carruurta, daryeelka da'da dugsiga, daryeelka ku salaysan dabeecadda dibadda, iyo shahaado. Bixiyeyaasha waa in ay haystaan liisan furan oo si wanaagsan u taagan wakhtiga codsiga iyo wakhtiga abaalmarinta. Bixiyeyaasha leh shatiga furan ee la kulma xiritaan ku meel gaar ah ilaa laba toddobaad (dhacdo kasta) COVID-19 awgeed ayaa sidoo kale codsan kara.
CODSIGA DEEQAWA COMPASS PORTAL
QOYSKA, SAAXIIBKA, IYO DERISKA (FFN):
Bixiyeyaasha FFN ee liisan ka dhaafa ee ugu yaraan hal ilmo ugu adeegay kabida afar ka mid ah lixdii bilood ee la soo dhaafay, ama laba ka mid ah saddexdii bilood ee la soo dhaafay, oo codsada kabida Nidaamka Lacag bixinta Adeegga Bulshada (SSPS) wakhtiga codsiga.
CODSIGA DEEQA FFN
QAYBINTA DHAQAALAHA DEEQA
DCYF waxay qabanqaabin doontaa dufcadaha codsiyada deeqda hal mar bishii inta lagu jiro xilliga codsiga.
Muddada codsigu wuxuu dhammaanayaa Juun 30, 2022.
Bixiyeyaasha waxay heli doonaan lacag-bixin deeq ah hal mar. Fadlan ogow in habbaynta lacag-bixinta elegtarooniga ah iyo Adeegga Boostada Maraykanku ay qaadan karaan dhawr maalmood , taasoo saamaynaysa taariikhda saxda ah ee bixiyeyaasha ay helaan lacagaha. Isniinta labaad ee bil kasta, DCYF waxay soo saari doontaa warbixin. Codsiyada ku jira warbixintaas dib ayaa loo eegaa oo, haddii la oggolaado, waxaa laga baaraandegayaa lacag bixinta dhammaadka bisha.
TAARIIKHDA CODSIGA AH
TAARIIKHDA NIDAAMKA LACAG-BIXINEED EE LA FILAYO
Kahor 8 subaxnimo Isniinta 2aad ee bisha Hababka lacag-bixinta usbuucii hore ee isla bishaas. Lacag bixinta waxa la heli karaa maalmo kadib.
Kadib 8 subaxnimo Isniinta 2aad Hababka lacag bixinta usbuucii hore ee bisha soo socota. Lacag bixinta waxa la heli karaa maalmo kadib.
DCYF waxay ka baaraandegi doontaa lacag bixinta SSPS. Haddii bixiyaha hadda ama uu hore uga helay lacag-bixinnada SSPS, waxay si la mid ah u heli doonaan DCYF Deeqaha Xasilinta Xannaanada Carruurta. Bixiyeyaasha aan lacagta ku helin SSPS waxay lacag-bixinta ku heli doonaan Adeegga Boosta ee Maraykanka. Lacag bixinta waxa lagu soo diri doonaa ciwaanka la xidhiidha lambarka SSPS.
Qalabka & Dokumentiyada
HAGAHA CODSIGA EE BIXIYAYAASHA SHAQAYSIGA AH
Soo degso LFCCP English Application Guide
Soo degso LFCCP Spanish Application Guide
Soo degso LFCCP Somali Application Guide
HAGAHA CODSIGA EE FFN
Soo degso FFN English Application Guide
Soo degso FFN Spanish Application Guide
Soo degso FFN Somali Application Guide
Dokumentiyada laxidhiidha deeqaha
SOO Degso FAQs Liisanka leh:
Soo deji FFN FAQs:
Licensed providers waxay gali doona WA Compass Provider Portal, u gudub tabka Macluumaadka Deeqaha, dooro Deeqaha Hadda, oo dooro arjiga Deeqaha Xasilinta Xannaanada Carruurta ee DCYF. Bixiyaha ayaa ka jawaabi doona su’aalo taxane ah ka dibna soo gudbin doona codsiga. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo tabka Macluumaadka Deeqaha ayaa laga heli karaa Codsiga Application Step-by-Step Guide.
Bixiyeyaasha FFN waxay heli karaan codsiga halkan, 24 saacadood maalintii, 7 maalmood todobaadkii. Bixiyaha ayaa ka jawaabi doona su’aalo taxane ah ka dibna soo gudbin doona codsiga. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo codsado ayaa laga heli karaa Codsiga Application Step-by-Step Guide.
Maxaa dhacaya haddii si ku meel gaar ah la ii xiro COVID-19 dartii? Weli ma codsan karaa?
Bixiyeyaasha sida ku meel gaadhka ah u xidhan ilaa laba toddobaad (dhacdo kasta) COVID-19 dartiis waxa laga yaabaa inay dalbadaan deeqda Xasilinta Xannaanada Ilmaha.
Haddii aan haysto goobo badan oo liisan leh, ma soo gudbin karaa hal codsi oo deeq ah?
Maya. Deeqaha Xasilinta Xannaanada Ilmaha waxaa la siiyaa xarun/goob shati u gaar ah, ma aha hay’ad weyn. Bixiyeyaasha leh goobo badan oo shati leh waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan hal codsi goob kasta oo shati leh oo u qalma deeqda.
Deeqahan ma la canshuuri karaa?
Haa Lacagta deeqda waxaa loo tixgeliyaa dakhli. DCYF waxay soo diri doontaa 1099 Janaayo ujeeddooyin canshuureed. 1099 waxaa ku jira dhammaan lacagaha DCYF ee lagu bixiyay xilliga sanadka cashuurta.
Lacagtan deeqda ah ma loo isticmaali karaa dib u soo celinta iibsigii hore?
Bixiyeyaasha ayaa laga yaabaa inay doortaan inay isticmaalaan dhaqaalaha Deeqaha Xasilinta Xannaanada Carruurta ee DCYF si ay naftooda ugu soo celiyaan kharashaadka la oggol yahay ee galay Janaayo 1, 2021 ka dib.
Waxaan ahay bixiyaha xanaanada carruurta guriga qoyska mana haysto wax shaqaale/shaqaale ah. Sideen u kharash gareeyaa Lacagta Xoog-shaqaynta?
Xarumaha guryaha qoyska ee liisanka leh ee aan lahayn shaqaale kale waa inay isticmaalaan tirada xoogga shaqaalaha si ay u kordhiyaan magdhowgooda. Tan waxa ku jiri kara magdhowga faa’iidooyinka daryeelka caafimaadka, Koontada Hawlgabka Shakhsiga, iwm. Si aad u caddayso dheeraad ah, fadlan la tasho xisaabiyahaaga ama lataliyahaaga maaliyadeed.
Caawimada farsamada ayaa lagu heli karaa labadaba 1-on-1 ama koox yar. Kulamadan waxa lagu soo gudbin karaa qof ahaan, si toos ah, ama telefoon ahaan.
Caawinaad farsamo ayaa diyaar ah si laguugu taageero luqadda aad doorbidayso.
Caawinta farsamada waxa ay noqon kartaa:
Caawinta inaad codsato deeqda xasilinta.
Faham sida maalgelinta loo isticmaali karo, iyo in diiwaannada la ilaaliyo.
Ku xidhitaan bixiyayaasha agabka kana jawaabta su’aalo dheeraad ah.
XIRIIRKA WAX GARGAAR AH IYO ILAHA
Bogga Deeqaha Xasilinta Xannaanada Ilmaha ee DCYF
Xasilinta Xannaanada Ilmaha Qodobbada Koodhka (Zip Code)
Macluumaadka mushaharka ugu yar
Daryeelka Ganacsiga Tom Copeland
Barkadda Beddelka ah ee imagine
U DIYAAR DARYEEL - barnaamijka ka hortagga cunsuriyadda
Imagine U - barnaamijka la-talinta xiriirka ku saleysan
JADWALKA GARGAAR FARSAMO
Isku qor hal saac oo cashar kooxeed oo baro sida loo dhex maro nidaamka codsiga CCSG.
Kulamadan kooxdu waxay u furan yihiin bixiyayaasha liisanka iyo FFN.
HALKAN KU JADWAL KALMO KOOX AH
Shuruudaha deegda iyo SHURUUDAHA GUUD
DCYF waxay u baahan doontaa bixiyayaasha inay ogolaadaan oo ay raacaan markhaatiyada soo socda:
Marka ay furan tahay oo la heli karo si loo bixiyo adeegyada daryeelka ilmaha, bixiyaha ayaa hirgelin doona siyaasadaha raacaya hagidda degaanka/Gobolka oo "inta ugu badan ee suurtogalka ah" waxay hirgelin doonaan tilmaamaha Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington (DOH);
Bixiyuhu wuxuu siin doonaa shaqaalaha magdhow buuxa, oo ay ku jiraan faa'iidooyinka haddii ay khuseyso, laga bilaabo taariikhda codsiga mana qaadi doono tallaabo kasta oo dhimaysa magdhowga toddobaadlaha ah ama heerka magdhowga ee ka hooseeya "magdhow buuxa," oo ay ku jiraan ceyrinta aan ikhtiyaarka ahayn wakhtiga codsiga iyo soo gudbinta; iyo
Bixiyuhu waa inuu u isticmaalaa qaybta cadadka xoogga shaqada ee abaalmarinta deeqda kordhinta magdhowga shaqaalaha ka shaqeeya xarunta bixiyaha.
Bixiyuhu waxa uu caddeeyaa in ay dib u eegeen macluumaadka xoogooda shaqalaha ee MERIT, iyo in macluumaadka uu yahay mid casri ah.
Bixiyuhu waxa uu ka dhimi doonaa khidmadaha qoysaska diiwaangashan ilaa inta suurtogalka ah, oo uu mudnaan siin doonaa qoysaska ku dhibtoonaya bixinta marka ay bixinayaan gargaarkan.
Bixiyuhu waxa uu ahaan doonaa mid furan oo uu awoodi doono inuu daryeelo carruurta ilaa jadwalka sannad dugsiyeedka 2021-22 ee dugsiga degmada, oo uu samayn doono dadaal kasta si uu u sii wado u adeegida carruurta wakhtigaas dhaaftay.
Bixiyuhu waxa uu hayn doonaa dhammaan rasiidhada iibka lagu sameeyay lacagta deeqda ah muddo shan sano ah, waxaana laga yaabaa in la waydiiyo inuu u soo gudbiyo rasiidhada DCYF. Haddii bixiyaha aanu awoodin inuu soo gudbiyo rasiidhada, waxa laga yaabaa in looga baahdo inay ku soo celiyaan qayb ama dhammaan dhaqaalaha Gobolka Washington.